Vitsy Monja no Nahita ny Asan’i Bezalila sy Oholiaba
HAMAKY AMIN'NY TENY Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Letonianina Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mongol Norvezianina Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Serba Serba (Soratra Romanina) Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Yorobà Zapoteky (Andilan-tany)
TSY vaovao tamin’i Bezalila sy Oholiaba ny resaka fanorenana. Tsy hita isa ny biriky nataon’izy ireo tamin’izy andevo tany Ejipta. Efa tantara sisa izany, ka tsy te hieritreritra an’izany intsony izy ireo. Nasaina nitarika ny fanorenana ny tranolay masina izy ireo tatỳ aoriana ka nanao asa tanana faran’izay kanto. (Eks. 31:1-11) Vitsy ihany anefa no nahita ny zavatra sasany nataony. Nahakivy azy ireo ve izany? Ary ianao? Tokony mba hisy hahamarika koa ve ny asanao?
ASA KANTO NEFA TSY DIA NISY MPAHITA
Tena sangan’asa miavaka ny fanaka sasany tao amin’ny tranolay masina. Eritrereto, ohatra, ireo kerobima volamena teo ambonin’ny Vata misy ny fifanekena. Nilaza ny apostoly Paoly fa “be voninahitra” izy ireo. (Heb. 9:5) Notefena tamin’ny marotoa ireo kerobima ireo. Alao sary an-tsaina ange ny hakantony e!—Eks. 37:7-9.
Raha mbola teo ny asa tanan’i Bezalila sy Oholiaba, dia ho mendrika ny haseho vahoaka any amin’ny tranombakoka malaza indrindra. Firy anefa no nahita ny hakanton’izy ireny, tamin’ny fotoana nanamboarana azy? Tao amin’ny Masina Indrindra no napetraka ireo kerobima. Ny Mpisoronabe ihany no nahita azy ireo indray mandeha isan-taona, rehefa Andro Fandrakofam-pahotana. (Heb. 9:6, 7) Vitsy ihany àry ny olona nahita azy ireo.
AFA-PO NA DIA TSY BE MPAHALALA AZA
Aoka hatao hoe ianao no nisasatra nanamboatra an’ireo kerobima. Inona no ho tsapanao rehefa nahalala fa vitsy monja no hahita an’ilay asanao? Mahatsapa hoe tena mba nahavita zavatra ny olona, rehefa misy midera sy mankasitraka. Izay aminy no porofo fa misy vidiny ny zava-bitany. Tsy toy izany kosa ny mpanompon’i Jehovah. Ny manao ny sitrapon’i Jehovah sy mahazo sitraka aminy no mahafa-po antsika, toa an’i Bezalila sy Oholiaba.
Fanaon’ny mpitondra fivavahana tamin’ny andron’i Jesosy ny nanao vavaka mampiaiky volana ny olona. Nilaza kosa i Jesosy fa tokony ho avy amin’ny fo ny vavaka ary tsy tokony ho fitadiavana dera amin’olona. Inona no ho vokany raha manaraka an’izany isika? Hoy i Jesosy: “Hamaly soa anao ny Rainao izay mijery ao amin’ny miafina.” (Mat. 6:5, 6) Tsy ny hevitry ny olona àry no tena zava-dehibe amintsika, fa ny hevitr’i Jehovah. Izy no tena mahita raha misy dikany tokoa na tsia ny vavaka ataontsika. Toy izany koa ny fanompoana masina ataontsika, na inona izany na inona. Tsy hoe rehefa midera antsika ny olona vao sarobidy ilay izy. Sarobidy kosa izany rehefa mampifaly an’i Jehovah, “izay mijery ao amin’ny miafina.”
“Nanarona ny tranolay fihaonana ny rahona, ka feno ny voninahitr’i Jehovah ny tranolay” rehefa vita tanteraka. (Eks. 40:34) Porofo izany fa tena tian’i Jehovah ilay izy. Inona re no tsapan’i Bezalila sy Oholiaba tamin’izay e? Marina fa tsy nosoratana teo amin’ny asa tanan’izy ireo ny anarany. Tsy maintsy ho afa-po anefa izy ireo nahalala hoe nitahy ny ezaka rehetra nataony Andriamanitra. (Ohab. 10:22) Azo antoka fa faly izy ireo nahita hoe mbola nampiasaina tamin’ny fanompoana an’i Jehovah nandritra ny taona maro ny asa tanany. Azo inoana fa ho faly be koa izy ireo rehefa hatsangana amin’ny maty ao amin’ny tontolo vaovao. Ho fantany mantsy fa nampiasaina tamin’ny fivavahana marina nandritra ny 500 taona teo ho eo ilay tranolay.
Hitan’i Jehovah hoe manetry tena sy vonona hanao ny asany ianao, na dia tsy misy olona mahita aza
Be dia be ankehitriny ny rahalahy sy anabavy miasa ho an’ny fandaminan’i Jehovah, nefa tsy misy mahalala. Misy, ohatra, mpanao sary, mpandika teny, mpanao sary miaina, mpitendry zavamaneno, mpaka sary, ary mpanoratra. Azo lazaina hoe tsy misy mahita ny asa ataon’izy ireo. Toy izany koa ny asa maro atao eo anivon’ireo fiangonana 110 000 mahery eran-tany. Misy mahita ve ny mpikarakara ny kaonty rehefa mameno ny tatitra momba ny kaonty isam-bolana? Ary ny mpitan-tsoratra rehefa mikarakara ny tatitra momba ny fanompoana? Ary mba misy mahita ve ny rahalahy na anabavy iray rehefa manamboatra zavatra simba ao amin’ny Efitrano Fanjakana?
Tsy nomena loka na meday na mari-pahatsiarovana i Bezalila sy Oholiaba, talohan’ny nahafatesany. Nankasitraka azy ireo kosa i Jehovah ary sarobidy lavitra noho ireo rehetra ireo izany. Azo antoka fa hitan’i Jehovah ny asan’izy ireo. Enga anie isika ka hanetry tena sy ho vonona hanao ny asan’i Jehovah toa azy ireo koa.